भोट हाल्नुअघि सोचौंः मासु–रक्सी र साडीमा नबिकौं ! « Online Sajha
निर्वाचनको माहोल एकाएक तातिएको छ। अब भोट हाल्न चार दिन मात्रै बाँकी छ। दल र दलालहरू मतदाताको घर-आँगन चहारिरहेका छन्। तल्लो दरबारको नयाँ ‘सिंह’ बन्न साढे चार वर्षपछि मतदाता खोज्दै घरदैलोमा पुगेका छन्, उम्मेदवार–समर्थक।
अघिल्लो निर्वाचनपछि हराएका जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारहरू गाउँ–ठाउँमा पस्दा नागरिक अलमलमा छन्। जनगुनासो छ, ‘जितेका त आएनन्, आएनन्! तर हारेका पनि लामो समयसम्म कतै देखिएनन्। बल्ल पो झुल्किन थाले त! ’ यद्यपि, गाउँको माया लागे झैं गरी लचकदार बनेर मतदाताको सहानुभूति बटुल्न उनीहरू अभ्यस्त नै देखिन्छन्।
नाच्दै, गाउँदै, मासु–भात बाँड्दै आइपुगेका छन्– उम्मेदवार–समर्थक। उम्मेदवारहरू भन्छन्, ‘यो पनि मैले गरेँ, त्यो पनि गरेँ। सबै मैले गरेँ। मेरै योजनामा यस्तो भयो। यो सब विकास हाम्रै पार्टीले गरेको हो।’
उनीहरू यसरी आफ्नो वर्चस्व प्रदर्शन गर्दैछन् कि– मानौँ यसअघि कोही थिएन र उनीहरूभन्दा पछि पनि कोही छैनन्। केही दिनपछि नेताहरू गाउँतिर खुब नाटक मञ्चन गरेका छन्। धान गोड्न, गहुँ काट्न खेतबारीमा पुगेका छन्। आफूलाई विकासवादी नेता भएको प्रमाणित गर्न खोज्छन्।
अब वर्तमानको समीक्षा गरौं– संस्थापक जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको सीमित सम्पत्ति मिलीजुली दोहन गरिरहेका छन्। हार्नेहरू ‘ट्वाँ’ परेका छन्, तर बोल्न सक्दैनन्। अनियमितताप्रति उनीहरूको खासै फरक मत छैन। किनकि, उनीहरूले एकदिन पुग्ने ठाउँ त्यहीँ हो भन्ने भन्ठानेका छन्। स्थानीय तहमा जित्ने–हार्नेहरूको रहस्यमय चुप्पी छ। विपक्षको मौनता रोचक छ।
पाँच वर्षे शासनकालमा जनप्रतिनिधिको राम–रमिता नै चल्यो। सामान्य जनताको चासो–गुनासो भुलेर उनीहरूले कार्यकालभर लुटपाट नै मच्चाएका छन्। उम्मेदवार अर्थात् ‘छोटे नेता’ हरू कुन मुख लिएर भोट माग्न टोल–टोलमा छिर्लान्रु
भ्रष्ट राजनीतिज्ञले मतदातालाई झुक्याउँछन्। छाक टार्न संघर्ष गर्नेलाई मासु–भात दिन्छन्। अन्धकारमा सुत्नेलाई बिजुलीको हावा गफ दिन्छन्। अनि भोट लुट्छन्। रक्सी–मासुमा भुल्नेलाई चुनाव सकिएको भोलिपल्टदेखि मुख सुक्न थाल्छ। रक्सी त के पानी पनि पाइँदैन। मासु त के हड्डी पनि भेट्दैनन्।
कुनै पनि राजनीतिक शक्ति भ्रष्टाचारबाट टाढा छैनन्। संविधानले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ। जनताको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकार छ। जसको निर्वाचन मिति नजिकिँदै छ। तर भारीका भारी बेथितिका चाङ पनि उत्तिकै छन्।
पुरानो व्यवस्था र पात्रप्रति आम–मानिस सन्तुष्ट थिएनन्। नेपाली जनताले नयाँ विकल्प खोजे। फलस्वरूप काठमाडौँको सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पुग्यो। ठाउँ–ठाउँमा भुइँतहको सरकार स्थापना भयो। तर पात्र परानै पुगेछन्, आचारण भ्रष्ट नै रहेछ। संघीयता संस्थागत गर्नुपर्नेहरू आ–आफ्नै भुँडी भर्नमा लागे। निर्वाचित भएको पाँच वर्षमै खुब आलोचित बने।
अघिल्लो निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारहरू नचिनेर नै भोट हालियो। उनीहरूमध्ये प्रायः लामो समयसम्म सहरमा फिरेका थिए। तर मतदाताले पार्टीगत आस्थाकै कारण मताधिकार प्रयोग गरे। अन्ततः कतिपय जनविरोधी नै बने१ परिवारवादमा रूमलिए। भ्रष्टहरूकै वरिपरी घुम्दा भ्रष्ट नै निस्के।
सडक खन्दा भ्रष्टाचार, खानेपानी मर्मत गर्दा भ्रष्टाचार। विद्यालय, अस्पताल भवन निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार, कृषिको अनुदान बाँड्दा भ्रष्टाचार। पुल बनाउँदा भ्रष्टाचार। कुलो सफा गर्दा भ्रष्टाचार। खेलकुद सामाग्री किन्दा भ्रष्टाचार। कर्मचारी राख्दा भ्रष्टाचार। नगर–गाउँ प्रहरी छान्दा भ्रष्टाचार। कहाँ छैन, भ्रष्टाचार। जताततै भ्रष्टाचार!
दैनिक जीवनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म भ्रष्टाचारका अनेकौं रंगहरू देख्न पाइन्छ। देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारको लागि सरकारलाई गाली गर्छौं तर निर्वाचनका बेला सोच्दैनौं- गलत पात्रलाई नै अनुमोदन गरेर फेरि किन भ्रष्टाचारलाई प्रवर्द्धन गर्छौंरु
यति धेरै पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार नगरेर के गर्छन् तरु भ्रष्टाचार जनताबाट सुरू अर्थात् आफैँबाट हुन्छ। कानुन निर्माण गर्ने जिम्मा प्रतिनिधिको हो। रक्सी–मासु र साडीमा उनै उम्मेदवारलाई मताधिकार गर्ने! अनि कमाउनका लागि सत्तामा पुगेका नेतालाई नै गाली गरिरहनेरु
भुइँतहको सरकार असल र इमान्दार व्यक्तिविहीन कहिलेसम्मरु चुनावमा भाग लिने कमै नेताहरू सफा छन्, तर उनीहरू निर्वाचन जित्दैनन्। जब सबै भ्रष्ट हुन्छन्, तब कसैले पनि एक्लै व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैन।